Home | SomaliSwiss Wararka Somaliswiss | Page 30
Home / Archive by category Home (Page 30)
Alshabaab oo isna Magac hor leh u bixiyay Dowlada Soomaaliya
Dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab ayaa ka dhex bilowda dagaal cusub oo dhinaca warbaahinta iyo adeegsiga magacyo, kadib markii Taliyaha Nabadsugida uu ku wargeliyay Warbaahinta madaxa banaan inay ugu yeeraan Magaca UGUS. Taliyaha Nabadsugida Jen. Tuur Yare ayaa sheegay in aanay aheyn in magaca Al-Shabaab oo magac fiican oo dhalinyaro ah loogu yeero, waxaana uu Warbaahinta […]
Mid ka mid ah raggii ka dambeeyay weerarkii Texas oo la aqoonsaday
Hey’addaha Ammaanka Mareykanka ayaa aqoonsaday mid ka mid ah labadii ruux ee looga shakisanaa inay rasaas ku fureen meel dibada ka ah xarun ay ku shirayeen Kartooniistayaal duleedka magaalada Dallas ee Gobolka Texas. FBI-da Mareykanka ayaa ku magacaabay Elton Simbson uu ahaa nin inta badan la tuhunsanaa, isla markaana dhowr jeer oo hore baaritaan lagu […]
Dowladda Senegal ayaa taageertay howlgalka uu hogaaminaayo Sacuudiga ee ka dhanka kooxaha Xuutiyinta ee la wareegay awooda dalka Yemen. Wasiirka arrimaha dibadda Senegal Mankeur Ndiaye ayaa sheegay in 2,100 askari oo ka socda wadankaas ay ku biiri doonaan howlgalka. Khudbad uu ka jeediyey Baarlamaanka wadankaas ayuu ku sheegay in hadafkoodu yahay in ay ka hortagaan […]
Ciidamada ka tirsan Dowlada oo weraray Gudoomiye Waaxeed.
Ciidamo hubeysan oo ka tirsan dowlada Soomaaliya oo meletariga ah ayaa weerar ku qaaday gudoomiye waaxeed ka tirsan degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Nuur Maxamed Axmed, oo ag gudoomiyaha waaxda Liiqliiqato ee degmada Kaxda ayaa ah gudoomiyaha waaxeedka la weeraray waxaana xiligaasi uu ku sugnaa guri dhisme uu ka socday. Gudoomiye waaxeedka la weeraray oo […]
General Indhocade oo dhaliilay Heshiiskii Garoowe
Wasiir Dowlihii hore ee Wasaarada Gaashaandhiga Dowladdii KMG aheyd Generaal Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacade oo kamid ah Siyasiinta ka soo jeeda Gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamuud iyo Ra’iisul Wasaaraha Xukumadda Cumar C/rashiid Cali Sharmaake aysan kala gooyn karin Gobolka Mudug. Generaal Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacade ayaa sheegay […]
Gudoomiyaha Ceelwaaq oo ku dhaawacmay Qarax Miino
Gelinkii dambe eee shalay waxaa qarax noocisu ahaa miino dhulka lagu aasay uu ka dhacay degamda Ceelwaaq ee Gobolka Gedo, qaraxa ayaa sababay khasaare dhawac u badnaa. Miinada ayaa lagu soo waramayaa in lagu aasay goob galab walba uu fadhiisan jiray gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee Ibraahim Guuleed Aadan. Sida wararka ay heleyso Wacaal ay sheegayaan […]
8 Boolis oo lagu diley weerar ka dhacay dalka Hindiya
Dabley hubeysan ayaa weerar gaadmo ah ku diley sideed kamid ah Booliska dalka Hindiya. Weerarka ayaa ka dhacay gobolka Nagaland ee ku yaalla Waqooyo-bari ee dalkaas, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay lix askari oo kale. Sida ay sheegayan wararka, dableyda ayaa rasaas ooda uga qaaday gaari ay wateen booliska oo xilliga u socday in ay […]
Muwaadin Soomaali ah oo lagu dilay Dalka K/Afrika.
Kooxo burcad South African ah ayaa xalay deegana hoostaga Magaalada Cape Town waxa ay ku dileen Muwaadin Soomaali ah kadib markii ay ku weerareen Goobtiisa ganacsi. Goob joogayaal ayaa ku waramay in Koox burcad ah oo gaarayay ilaa sadax nin oo bistoolado ku hubeesnaa ay weerareen Goob ganacsi ay Soomaali laheed waxa ayna halkaasi ku […]
ISIS oo dishay 300 Yaziidiyin dalka Ciraaq
Dowladda Ciraaq ayaa sheegtay in ururka Daacish ay dileen ilaa 300 oo qof oo kasoo jeeda bulshada laga tiro badan yahay ee Yazidi kuwaas oo ay afduub u haysteen. Madaxweyne kuxigeenka Ciraaq Osama Al-Nujaifi ayaa warbaahinta u sheegay in dadkan lagu laayey magaalada Mosul oo ay ka taliyaan mintidiinta ISIS jimcihi lasoo dhaafay. Wuxuu si […]
Xogheyaha arrimaha dibadda Mareykanka oo booqanaya Kenya
Xogheyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa la filaaya in maanta oo axad ah uu gaaro magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Booqashadiisa ayaa la filaaya in ay qaadato saddex maalmood, waxaana uu masuuliyinta sare ee dalka Kenya kala hadli doona labo qodob oo kala ah: Iskaashiga dhinaca amaanka Safarka Madaxweyne Obama uu ku […]